Review Ahịa Reviewwa Review April 2021 Pros & Cons Uncovered - Mụta 2 Trade
Nyocha Ahịa Worldwa Review
$ 2500 kacha nta ego
Ahịa iswa bụ usoro ntinye ego zuru ụwa ọnụ na-emeri nke na-enyere ndị mmadụ aka inweta nlọghachi na-enweghị atụ site n'ịzụ ahịa na ọla dị oke ọnụ na akụ dijitalụ. Lọ ọrụ ahụ malitere na 2003 dị ka onye na-ere ọla dị oke ọnụ ahịa. Mgbe ọtụtụ afọ nke mmụba na mmata, ụlọ ọrụ ahụ gbanwere atụmatụ ya iji nye akaụntụ ntanetị Artificial Intelligence (AI) n'ịntanetị. O tinyekwara akụ dijitalụ dị ka Bitcoin na Ethereum. Companylọ ọrụ ahụ na-ejikwa ihe karịrị $ 30 maka ndị na-azụ ahịa mkpọsa, ndị nwere nnukwu ego, na ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ. O nwere ihe karịrị ndị ahịa 50,000 n’ụwa nile.
kacha nta ego $ 2500
trading Platform Ngwa ahia ahia ahia
Ofdị Akụ Ngwongwo ndị dị oké ọnụ ahịa na cryptocurrencies
Uru na ọghọm World Barkes
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ na ụlọ ọrụ ego.
Na-agwakọta ma ọgụgụ isi na ike mmadụ.
Feesgwọ dị ala.
Enweghị nkwụnye ego na ụgwọ ndọrọ ego
Ndị njikwa mpaghara raara onwe ha nye maka Akaụntụ Gold Premier.
Ndị ahịa nwere ike ịgbaso arụmọrụ.
Ndị ahịa na-ejigide nwe akaụntụ
A naghị achịkwa ya, nke dị ntakịrị ihe egwu.
Amachaghị banyere ụlọ ọrụ na njikwa ya.
Imirikiti ozi dị na saịtị ahụ enweghị ike ikwenye.
Enweghị ngwaọrụ ahịa dị na weebụsaịtị.
Enweghị ngwa mkpanaaka.
Ahịa ụwa adịghị ka ndị na-ere ahịa ọdịnala. Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ akaụntụ ndị AI jisiri ike. Nke a pụtara na ị na-edebe ego na ụlọ ọrụ algọridim ga-azụ ahịa maka gị. Ngwaahịa na ọ ahia bụ ọla ọcha, cryptocurrencies , na ọla osisi dị ka ọla kọpa na rhodium. Dabere na weebụsaịtị ya, ụlọ ọrụ ahụ na-azọrọ na ị nwere ike ịzụ ahịa ego ndị ọzọ na ikpo okwu ya. Agbanyeghị, ileba anya na peeji azụmaahịa ya na-egosi na nke a ezighi ezi. Kama, ụlọ ọrụ ahụ na - emegharị gị gaa na HYCM, nke bụ usoro azụmaahịa kwụụrụ onwe ya.
Nkuzi: Otu esi edebanye aha na ahia ya na ahia ahia uwa
Usoro ịdenye aha na Ahịa iswa dịtụ mfe. Nke mbu, a na-atụ aro ka ị mara nke ọma na ikpo okwu. Gaa na ebe nrụọrụ weebụ ma gụọ ọtụtụ ihe ị nwere ike banyere ụlọ ọrụ ahụ. Ọzọkwa, gụọ usoro na ọnọdụ, nke ga - enyere gị aka ịmata ikike gị mgbe ị na - eji ụlọ ọrụ.
Mgbe ị matara ụlọ ọrụ ahụ nke ọma, ị ga-aga a na peeji nke. A na-atụ aro ka ịhọrọ nhọrọ mbụ, ebe ị mepụtara akaụntụ ngosi $ 2,500 n'efu. I kwesiri iwepụta oge na akaụntụ ngosi a iji hụ otu ikpo okwu si eme.
Mgbe afọ juru na akaụntụ ahụ, ị ​​ga-ahọrọ ụdị nke akaụntụ ịchọrọ. Enwere akaụntụ abụọ. Akaụntụ ọkọlọtọ nwere opekempe ego nke $ 5,000 ebe akaụntụ izizi ọla edo nwere opekempe nguzo nke $ 25,000.
Mgbe ịhọrọ akaụntụ ahụ, a ga-ajụ gị ka ị nye adreesị email gị na paswọọdụ gị. Nke a ga - akpọga gị na ibe na - esote, ebe a ga - ajụ gị maka ozi ndị ọzọ. Ihe omuma a bu aha enyere gi, aha ezinulo gi, adreesị gi, obodo gi, koodu nzi ozi, ndi amaala, ubochi omumu ya, na akara ekwentị gi. A ga-ajụkwa gị ka ị nyefee paspọtụ gị ma ọ bụ NJ gị na ụgwọ eji enyere gị aka. A na-eji ha maka ebumnuche nyocha. Ọzọkwa, a ga-agwa gị ka ị pịa ọtụtụ igbe. Ndị a bụ nkwupụta okwu, ma ịchọrọ akaụntụ islam, ma ị nwere akaụntụ azụmaahịa ụwa na-ere ahịa, ma ị nwere mmasị na ọla edo na ọlaọcha na-eweta ego, yana ihe ejiri aka gị abụọ. Emechaa, a ga-akpọrọ gị na akaụntụ nkeonwe.
Dị ka akaụntụ azụmaahịa niile, nyocha dị ezigbo mkpa na iwu. Nkwenye mbụ ị ga - eme bụ iji nyochaa adreesị ozi-e gị. Na-eme nke a naanị site na ịpị njikọ ezigara na adreesị email gị mgbe ị mepụtara akaụntụ gị. Companylọ ọrụ ahụ ga-enyocha paspọtụ gị ma ọ bụ kaadị njirimara gị yana ụgwọ ọrụ gị. Ọzọkwa, a ga-achọ ka ị nyefee foto emelitere nke onwe gị. Y’oburu na ibu onye oru gi, ulo oru a gha acho uzo ozo. Ọ na-eji nkọwa ụlọ ọrụ maka nkwenye.
Ahịa ụwa na-enye ọtụtụ ụzọ itinye ego. Nwere ike itinye naanị ma ọ bụrụ na ịnwere akaụntụ na-arụ ọrụ. Variouszọ dị iche iche ị nwere ike isi tinye ego bụ nnyefe waya, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ndị ọzọ na-enyefe ego Cryptocurrency, Skrill, Neteller, RapidPay na Webmoney. Ndị a niile nwere ego nkwụnye ego 0%. I nwekwara ike itinye ego site na iji Visa na Mastercard ma nke a na-akwụ ụgwọ nkwụnye ego 7%. A na-eme ego ego Cryptocurrency site na iziga crypto na obere akpa enyere.
Nwere ike ịdọrọ ego na akaụntụ gị site na iji Bitcoin, Bank Transfer, and Debit card. Enweghị ụgwọ mgbe ị na-eji Bitcoin. Bank mbufe ebubo ewepụghị $ 35 mgbe debit kaadị na-enyefe ụgwọ 2% nke gị ụgwọ. I wepu ego gi site na ijuputa udidi na a na peeji nke ma ọ bụ izipu ozi email na ịkwụ ụgwọ@worldmarkets.com. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ị nwere ike ịdọrọ ego naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ. Ọzọkwa, ị ga-ewepụ ego na akaụntụ gị. Companylọ ọrụ ahụ na-eme nke a iji hụ na ọ ka na-agbaso iwu KYC na AML.
Otu esi etinye ego na ego
E nwere ụzọ ụzọ abụọ itinye ego na azụmaahịa ụwa. Nke mbu, enwere ahia onwe onye akaụntụ. Akaụntụ a na-enye gị ohere ịzụ ahịa ozugbo n'ahịa ego. Na nke a, ị nwere ike ịzụ ahịa ụdị ego niile, nghazi, indices na ngwaahịa. Agbanyeghị, dịka e kwuru n'elu, World Markets anaghị enye ọrụ a. Kama, ọ na - arụ ọrụ dị ka onye na - ewebata broka maka HYCM, nke bụ nke na-enye nyiwe. HYCM na-achịkwa CySEC, FCA, na CIMA.
Secondzọ nke abụọ, nke bụ achịcha na butter nke Ahịa Markwa bụ ịmepụta akaụntụ jikwaa. Akaụntụ a na-achịkwa na-arụ ọrụ dị ka ego mkpuchi. Na nke a, ụlọ ọrụ ahụ ga-akwụ gị ụgwọ ego 1% na ego mgbali 20%. A na-akwụ ụgwọ ịgba ume na uru niile ọ na-eweta. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịhọrọ ụdị akaụntụ ịchọrọ ma tinye ego. Can nwere ike inyocha gị trades si ọgwụgwụ gị.
Ere Ahia ahia Markwa
Ahịa ụwa na-enye otu ikpo okwu ahia. Nke a bụ MQL Copy Trader platform. Mgbe ị mepụtara akaụntụ, dashboard ga-enwe ọtụtụ wijetị. Enwere akwụkwọ nhazi azụmaahịa nke na-egosi azụmaahịa ndị emeghe na otu ha si arụ. Enwere eserese dị ndụ. Chaatị a nyere TradingView, nke bụ otu n’ime ngwa ahịa ama ama n’ụwa niile. Enwere ngwaọrụ ndị ọzọ TradingView na-enye na dashboard. Dị ka ihe ọorụ, a dashboard ga-eji na-ele arụmọrụ nke gị trades na-elele gị balances.
Ozi Ahịa Worldwa
URL ga saịtị ntanet: https://worldmarkets.com/
Asụsụ: Bekee. Companylọ ọrụ ahụ na-enye atụmatụ Google Translate
Akaụntụ ngosi: Ee
Nkwụnye ego: Nnyefe ego, Skrill, Neteller, Webmoney, ego ọsọ ọsọ, kaadị akwụmụgwọ, yana cryptocurrencies.
Nhọrọ ndọrọ ego: Nyefe ego, Bitcoin, kaadị
Iwu na Nchedo
Nchedo bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ndị ahịa na ndị na-etinye ego kwesịrị inwe mgbe niile. Ndị na-achịkwa ụwa anaghị achịkwa usoro ahịa dị ka CySEC, FCA, na ASIC. Otú ọ dị, ụlọ ọrụ ahụ na-eji ụkpụrụ nke ndị na-ere ahịa ọ na-eji. Na nke a, ụlọ ọrụ ahụ na-eji ụkpụrụ nke HYCM, nke bụ nzukọ na-achịkwa nke ọma. Yabụ, mgbe itinye ego, iwu HYCM kpuchiri gị. Agbanyeghị, Ahịa stillwa ka na-eduzi KYC na AML.
Markgwọ na Ahịa Worldwa
Ahịa ụwa na-ebo ụgwọ abụọ maka akaụntụ ya jisiri ike nke AI. Akaụntụ ọkọlọtọ nwere nkwụnye ego kacha nta nke $ 5,000. Companylọ ọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ njikwa 1% na ego arụmọrụ 20%. Yabụ, ọ bụrụ na ịnwere akaụntụ $ 5,000, ụlọ ọrụ a ga-ewere ego njikwa $ 50. Ọ bụrụ na akaụntụ ahụ rite na 20%, ụgwọ ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ $ 200. Akaụntụ Gold Premier nwere nkwụnye ego kacha nta nke $ 25,000. Companylọ ọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ njikwa njikwa 1% yana ụgwọ arụmọrụ arụmọrụ 10%.
Ahịa ụwa anaghị akwụ ụgwọ ndị ọzọ. Enweghi oke aka na ego ị nwere ike itinye.
Nkwado Ndị Ahịa Worldwa
Ahịa allowswa na-enye ọtụtụ usoro ọrụ ndị ahịa aka. Ọ na-enye usoro nkwado email, ebe ị nwere ike izipu ozi email. Companylọ ọrụ ahụ nwekwara nọmba ekwentị na mba 37, enwere ike ịchọta Ebe a. Ahịa Worldwa edebanye aha na ọfịs na Norway, China, Switzerland, na Iceland. O nwere ụlọ ọrụ nnọchite anya na Manama na Panama.
Otu Ahịa Worldwa Ga-esi Na-atụnyere Broka Ọzọ
Ahịa ụwa abụghị onye na-ere ahịa. N'adịghị ka ndị ọzọ na-azụ ahịa, Ahịa doeswa anaghị enye usoro ikpo okwu. Instrad, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ dị ka onye na-ewebata HYCM, nke bụ nnukwu onye na-azụ ahịa na mba ụwa. Ihe ọzọ dị iche na ahịa ụwa na ndị ọzọ na-ere ahịa bụ na ọ bụ tebụl azụmahịa. Nke a pụtara na ọ na-ahịa ozugbo maka ndị ọzọ na -ere ahịa na institutional ahịa. Ihe ọzọ dị iche bụ na ọ na-ere ọla nkịtị na ọlaọcha.
Mmechi: Ahịa Safewa Ọ Dị Mma?
Ahịa iswa dị mma mgbe ị tụlere na ọ na-eji ikpo okwu azụmaahịa na ọrụ ndị HYCM nyere, nke bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa nwere nkwenye na ihe karịrị afọ iri abụọ na ụlọ ọrụ ahụ. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịghọta ọtụtụ ihe. Nke mbu, pere mpe, na usoro njikwa na isi ụlọ ọrụ mara banyere ụlọ ọrụ ahụ. Imirikiti azọrọ na weebụsaịtị ya enweghị ike ikwenye. Nke abuo, ụlọ ọrụ ahụ na-azọrọ na algọridim ya na-arụ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị, enweghị ike igosipụta arụmọrụ a ma ọ nweghị ihe akaebe nke arụmọrụ ya n'ọdịnihu.
Bekee. Companylọ ọrụ ahụ na-enye atụmatụ Google Translate
Nhọrọ ndọrọ ego:
Nyefe ego, Bitcoin, kaadị